Ishishini leeBobs | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 18, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndibukele iindaba zibonisa ngolunye usuku ukuba iGoDaddy izakubhengeza ezinye iintengiso eziphikisanayo zeSuperbowl. Iqela lezentengiso leGoDaddy liyatyhala umda kulo nyaka, lifumana ingqalelo eyongezelelweyo ngokungenisa iqela lezentengiso ezaliwe ukuba zijonge le superbowl.
I-GoDaddy ibhengeza elubala ukungavisisani njengokufuna kwabo iSuper Bowl XL. Uya kufumana ixesha elifanelekileyo leentengiso ezingavunyelwanga ukubonwa kwiSuperbowl kwindawo yazo. Njengakunyaka ophelileyo, umkhankaso we-boob ubonakala utsala umdla omkhulu kwiGoDaddy. Ndiyazi ukuba ndizigcinile kubo, er, iphulo lokuthengisa.
Ngokucacileyo le ibeyimpumelelo yentengiso kuGoDaddy. Ndiyazibuza ukuba kutheni, nangona kunjalo. Andizukuxoka, ndiyathanda ukubukela ezi ntengiso kakhulu njengomfo olandelayo. Kodwa ukuthenga i-domain ngeGoDaddy akuniki ukufikelela okongezelelekileyo kwezo boobs. Akukho mhla, akukho poster, akukho mityikityo, akukho nto… nkqu neli liso. Emva kokuba uthenge i-domains ye-boobs, ushiye ishishini. Isixelela ntoni le boobs malunga neshishini? Jonga zonke iintengiso kwiGoDaddy.com. Ngaba omnye wabo uthetha nantoni na malunga nelona shishini?
Umbhalisi wesizinda sakho sisigqibo esibalulekileyo. Balawula indawo yakho. Oko kufana nebhanki elawula imali yakho. Kuya kufuneka bathembeke, babe neempawu ezintle, kwaye babe nezixhobo zolawulo ezimnandi zokulawula imimandla yakho. Ndisebenze noGoDaddy, abaxhasi bam abambalwa banemimandla yabo ebanjelwe eGoDaddy. Iibhokhwe ezintle, ujongano lousy. Yiyo yonke into endiyaziyo ngeGoDaddy.
Okumangalisayo kukuba, ngoLwesithathu ophelileyo ndifumene umnxeba ovela kuBen Goldsmith, uMlawuli oManyeneyo apha Dotster.com . UBen bobabini bandibulele ngokuxhasa uDotster kwiwebhusayithi yam post yangoku kwaye wazisa kum ukuba unxibelelwano lwam kwiwebhusayithi yam alunakusebenza kakuhle kuba bendikhomba indawo endiyisusileyo kwiakhawunti yam. Wow… ngoku kuhle. UBen ukhathalele ngokwaneleyo kangangokuba wayithatha loo fowuni weza kum.
Andikaze ndikonwabele ukuthetha naye nabani na eDotster ngokobuqu ngaphambili… oko kubalulekile kuba oko kuthetha ukuba iminikelo yabo isebenza kakuhle. Ndithathe ixesha ukuxelela uBen lonto emnxebeni. Emva kobusuku endibe nabo ngerejista.com iinyanga ezininzi ezidlulileyo, ndazama uDotster kwaye bendihlala nabo ukusukela oko.
IiBoobs zinokuba kuhle ukujonga, kodwa Dotster.com yindawo entle yokubhalisa indawo yakho ene… ixesha.
I-Dotster ikwanazo nezinye iinkqubo kunye nokunikezelwa kwenkonzo, kubandakanya I-VDS ukubamba. Zijonge xa ​​ufumana ithuba, ndiyakuthembisa ngekhe ujongane namabhulu ... ngaphandle kokuba oko kubalulekile kwishishini lakho.
PS: Ndinamakhonkco onxibelelwano eDotster.com kwesi sithuba. Ndifuna ukubona ukuba ii-boobs ziyasebenza nentengiso ehambelana nayo.
tags: intengisoassUmbhalisi wesizindaukubhaliswa kwesizindaichaphazagodaddy
Imithetho yewijethi, iNkxaso kunye neRhafu yokuThengisa
Funda malunga neLanga noJonathon Shwartz kolu Dliwanondlebe olukhulu
Jan 18, 2007 ngo-1: 51 PM
Njengayo nayiphi na intengiso; unokwenza olona phulo lubalaseleyo, kodwa ukuba imveliso iyabheda, iya kusilela. (Hayi, masibone ukuba iVista izakwenza njani.)
Kodwa kwathiwa, ukuba ungabeka ii-banner ezi-2-ii-boobs ezisuka kwiGoDaddy kunye nesalathiso seglobhu yeglobhu. Thembeka: yeyiphi onokuyicofa kuqala? 🙂
Jan 18, 2007 ngo-5: 17 PM
Ukwabelana ngesondo kuyathengisa. Universal Inyaniso kwindalo iphela… yetekhnoloji, imidlalo, ukonwabisa, nantoni na!
Jan 18, 2007 ngo-8: 52 PM
Ukusuka kwisihloko, bendicinga ukuba le izakuba sisithuba malunga neCongress 🙂
Ndiyavuma ukuba ii-boobs ziyathengisa, kodwa andizukufuna ukuzonwabisa ngeendawo zam. Ndihleli ne-DirectNIC iminyaka, kwaye bahlala bonwabile. Baye basebenza ngoKatrina (basekwe kwi-NO), kwaye basebenze ngeempundu ukugcina yonke into isebenza.
Boobs, okanye akukho boobs, ndibambelela kuzo.
Jan 18, 2007 ngo-9: 59 PM
Martin: Um… ichaphaza kunjalo. 😉
UTony Chung: Kubuhlungu kodwa kuyinyani… ingxaki apha kukuba akukho sini, kukuvuselela nje.
UTony D. Clark: Ubuncinci ezi boobs zinenjongo kwaye zijongeka ngcono!
Jan 27, 2007 kwi-12: 03 AM
Ukuba ufuna isizathu esivakalayo sokungajongani neGoDaddy, uyakuyifumana Apha.
Juni 11, 2007 ngo-11: 05 PM
Kuyafana nakum. Ndacinga ukuba esi sisithuba sikwezopolitiko. Ngoku ndiyazi ukuba ndiyavuma ngokupheleleyo ndiyazithanda iintengiso ze-boob ezivela kwiGoDaddy kwaye ndinemimandla yam nayo.